Hawaii waxay biloowdaa socdaalayaasha barnaamijka ka reebitaanka tallaalka ee lagu tallaalay Gobollada Mareykanka iyo Mareykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Hawaii waxay biloowdaa socdaalayaasha barnaamijka ka reebitaanka tallaalka ee lagu tallaalay Gobollada Mareykanka iyo Mareykanka
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa dadka safarka ah ee lagu tallaalay Gobollada Mareykanka iyo Mareykanka inay dhaafaan shuruudaha karantiil ee gobolka iyo caddeynta tallaalka.
Socotada lagu tallaalay Mareykanka ama Gobollada Mareykanka way ka qeyb geli karaan barnaamijka laga bilaabo 15kath maalin kadib tallaalka labaad ee tallaalka Pfizer ama Moderna ama hal qiyaas oo ah tallaalka Johnson & Johnson.
Socdaalayaashu waa inay keenaan nuqul adag oo ah dukumintigooda tallaalka si ay u muujiyaan shaashaddayaal irridda kahor intaysan fuulan iyo / ama markay yimaadaan Hawaii
Saxeex cadeymaha sharciyeed ee khadka tooska ah ee Safarada Amni ee Hawaii.
Hawaii waxay soo gabagabeyneysaa diyaar garowga 8da Luulyo ee Gobolka HawaiiBarnaamijka ka-reebitaanka tallaalka ee loogu talagay dadka safarka ah, ee Hawaii u socdaalaya ee lagu tallaalay Mareykanka ama Gobollada Mareykanka. Barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa socdaalayaas inay ka gudbaan shuruudaha karantiil ee gobolka iyo caddaynta tallaalka.
Socotada lagu tallaalay Mareykanka ama Gobollada Mareykanka way kaqeyb qaadan karaan barnaamijka ka reeban ee ka bilaaban doona 15kath maalin kadib qaadashadooda labaad ee tallaalka Pfizer ama Moderna - ama bilawga 15-kath maalin kadib markay heleen hal qiyaas oo ah tallaalka Johnson & Johnson.
Intaas waxaa sii dheer, socdaalka ku xiran Hawaii waa inuu:
U soo rar mid ka mid ah saddexda dukumiintiga tallaalka koontadooda Safarrada Safarka ah ee Hawaii, ka hor intaadan u safrin Hawaii. Mid ka mid ah dukumiintiyada soo socda waa in la soo galiyaa:
Kaarka Diiwaanka Tallaalka CDC COVID-19
VAMS (Nidaamka Maamulka Maamulka Talaalka) daabacaadda OR
Foomka DOD DD 2766C
Nidaamka dijitaalka ah ee Safarka Safarka ayaa hadda u oggolaanaya dukumintiyada tallaalka ee socdaallada imanaya Hawaii bisha Luulyo 8 iyo wixii ka dambeeya
Saxeex cadeymaha sharciyeed ee khadka tooska ah ee Safarada Amni ee Hawaii, adoo xaqiijinaya dukumintiyada la soo rogay inay run iyo sax yihiin.
Keen nuqul adag oo ah dukumintigooda tallaalka si loogu muujiyo shaashadda albaabka kahor intaan ladaarin iyo / ama imaatinka Hawaii. Baadhayaashu waxay dib u eegi doonaan / xaqiijin doonaan dukumintiyada tallaalka, Aqoonsiyada sawir ee isku habboon, magaca iyo DOB ​​iyo sidoo kale inay xaqiijiyaan in caddayntu ay saxeexan tahay.
FIIRO GAAR AH: Caruurta 5 sano ka yar looma baahna inay is baaraan lamana karantiili doono haddii ay la safrayaan qof weyn oo leh ka-reebitaan baaris safar ka hor ama tallaal laga reebo. Carruurta 5 sano jirka ah ama ka weyn ee aan la tallaalin waa inay kaqeyb galaan Barnaamijka Tijaabada Safarka kahor oo ay la tijaabiyaan lammaane Imtixaan lagu kalsoon yahay si looga gudbo karantiil 10 maalmood ah oo qasab ah.
Gobolku wuxuu si guul leh u bilaabay barnaamijka ka-reebitaanka tallaalka ee loogu talagalay dadka safarka ah ee lagu tallaalay Gobolka Hawaii, Juun 15.
Barnaamijkan ma daboolayo socotada caalamiga ah.
Sunny Seychelles Waxay Soo Dhaweysay Duulimaad Cusub oo Air France ah
Diyaar u ah inaad mar kale xaflad samayso: Iibinta Champagne waxay dejinaysaa cusub